आन्तरिक पर्यटकलाई देश दर्शन गराउंदै हाइक अन ट्राभल एण्ड ट्रेक ! - ParyatanBazar.com
आन्तरिक पर्यटकलाई देश दर्शन गराउंदै हाइक अन ट्राभल एण्ड ट्रेक !
चैत १२ ,काठमाडौँ। कोरोना महामारी पछि आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्यो र देशभरिकै होटेल तथा होम स्टे हरू केही मात्रा मा भए पनि चलायमान बने। सन्धी विदेशी पर्यटक लाई मात्र पर्यटक ठान्ने हरुले पनि आन्तरिक पर्यटकको यथार्थता जान्ने मौका पाए।
यही बिचमा धेरै ट्राभल एजेन्सी हरुले आन्तरिक पर्यटकलाई नेपालका कुना काप्चा पनि राम्रै सँग अवलोकन गराए। सुरुवाती दिनबाटै आन्तरिक पर्यटनमा जोड दिँदै आएको हाइक अन ट्राभल एण्ड ट्रेक ले पनि हजारौँ आन्तरिक पर्यटकलाई देश दर्शन गराउन सफल भयो।
जाडो मौसम र हिउँको समयको उचित व्यवस्थापन गर्दै धेरै आगन्तुकलाई कालिन्चोक यात्रा गराएको हाइक अन ट्रेक का सञ्चालक शान्त मणि दनै (रबिन) ले बताए। उचित मूल्य , राम्रो व्यवस्थापन र सुविधा कै कारण धेरै भन्दा धेरै पर्यटकले हाम्रो ट्राभल एजेन्सी लाई रुचाउनु भएको हुनसक्ने सञ्चालक दनैले जानकारी गराए।
मनकामना , पोखरा , कालिन्चोक , जिरी ,बन्दीपुर ,चितवन – सौराहा ,कुस्मा , मुक्तिनाथ , इलाम दार्जिलिङ लगायतका विभिन्न स्थानमा पर्यटकलाई घुमाउँदै आएको यस ट्राभल एजेन्सी ले यस सिजनमा मात्र ५ हजार भन्दा बढी आन्तरिक पर्यटकलाई देश दर्शन गराएको छ।
कुन स्थानमा बढी
चिसो मौसम र हिउँ सँगै माताको दर्शन गर्न पाउने अवसर लाई अङ्गाल्दै यसपालि धेरै पर्यटकहरुले कालिन्चोक मा रुचि देखाएको सञ्चालक दनैले बताए। कालिन्चोक सँगै जिरी जाने पर्यटक हरू पनि थपिएको उनको अनुभव छ। कालिन्चोक सँगै जिरीको समेत हामीले पर्यटकको इच्छालाई मध्यनजर गर्दै प्याकेज बनाएका थियौँ उनले भने। त्यस्तै पोखरा , बन्दीपुर ,मनकामना दर्शनमा जाने पर्यटकहरू पनि उल्लेखनीय रहेको उनले बताए।
लामो समय देखि हाइक अन ट्राभल एण्ड ट्रेक बाट नै यात्रा गर्दै आएका अमृत शर्मा यस एजेन्सी को सुविधाबाट सन्तुष्ट छन्। उत्कृष्ट सेवा , फ्रेन्डली वातावरण , होटेल तथा होम स्टे को उपयुक्त रोजाइ र पर्यटकको बजेट सबै कुरालाई ध्यान मा राखी एजेन्सीले सेवा दिएकै कारण आफु यस एजेन्सीको नियमित पर्यटक बनेको उनले खुलाए। अमृतले यहीँ बाट १० भन्दा बढी स्थानको सफल भ्रमण गरिसकेका छन्।
काठमाडौँ को ठमेल बाट सेवा सुरु गरेको हाइक अन ट्रेक ले हालै पोखराको मुस्ताङ चोकमा पनि शाखा विस्तार गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिरहेको संस्थाका एक्जुकेटिभ सेल्स डाइरेक्टर प्रज्वल नेपालले जानकारी दिए ।
आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई उचित प्याकेज बनाएर देश दर्शन गराउनु नै हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो , जसमा छाया मा परेका गन्तव्यमा पनि पर्यटक पुर्‍याउने हामीले जमर्को गरेका छौँ , नेपालले भने। निरन्तर रूपमा नेपाललाई चिनाउने र नयाँ नयाँ प्याकेज मार्फत एकै स्थानको पनि फरक फरक स्वाद चखाउने कार्यमा बढी केन्द्रित भएको नेपालले बताए।
ट्राभल प्याकेजका साथै भारतीय बसको टिकट , आन्तरिक हवाई टिकट तथा बाह्य हवाई टिकट पनि हाइक अन ट्रेकले गर्दै आएको छ। थप जानकारीको लागि हाइक अन ट्रेकको वेबसाइट लग इन गरेर पनि हेर्न सकिनेछ।